” မဦေးနဲ့ယှဉျကာ သူ့အား နိုငျငံ့သစ်စာဖောကျလို ပတျရမျးပွောဆိုနတေဲ့သူကို အခကျြကကြပြွနျလညျ ပွဆေိုတုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ မိတျကပျမထကျ” – myannewsmedia.com
” မဦေးနဲ့ယှဉျကာ သူ့အား နိုငျငံ့သစ်စာဖောကျလို ပတျရမျးပွောဆိုနတေဲ့သူကို အခကျြကကြပြွနျလညျ ပွဆေိုတုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ မိတျကပျမထကျ”
November 19, 2021 - by sweety - LeaveaComment
CeleChitThu ပရိသတျကွီးရေ မိတျကပျမထကျကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့အားမိတျကပျမဦေးနဲ့ယှဉျကာပွောလာ တရားလှနျဝဖေနျလာမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျတုနျ့ပွနျခပြေခဲ့တာပါ။ ”ငါတို့က အလှူခံစားရမှာလားအလုပျလုပျမှ အကုနျနောကျကလူတှအေဆငျပွမှောလအေလုပျအကွောငျးတငျမှ အလုပျလုပျရတာလငေါဘာမှမတငျဘဲ ဘယျသူမှငါ့ကိုလာအလုပျမပေးဘူးနျော။ငါတို့က သူမြားအလုပျဝငျလုပျရတာမှာဟုတျဘူး။ငါတို့ကိုယျတိုငျ အလုပျရှာလုပျရတာအလုပျကိုယျ့ဆီလာဖို့ ဖိတျချေါနရေတာကိုယျရှာမှရတာကိုကနျြတဲ့သူတှကေိုဝရေမြှရတာဘယျသူမှတငျမကြှေးထားဘူးနိုငျငံရေးမထေ့ားပွီး ပြျောနတေဲ့သူထဲလညျးငါတို့မပါဘူး။
မွို့ပျေါနတောခငျြးအတူတူ သူတို့ကဘဲနိုငျငံကယျတငျနတေယျအခြိုးမြိုးနဲ့ငါတို့အလုပျလုပျတဲ့သူ အလုပျအကွောငျးတငျတဲ့သူကဘဲ နိုငျငံ့သစ်စာဖောကျလို ပတျရမျးနပွေီးပွောနတေယျမိတျကပျဆရာက မိတျကပျလိမျးမှငှဝေငျတာလေ ပှဲရာသီ ဒီအခြိနျဘဲအလုပျလုပျငှစေု ….ပှဲရာသီကုနျရငျ အကုနျရှိတာထိုငျစားရတာ ထုံးစံလေ အဲ့တာရှေးကတညျးကမင်ျဂလာဆောငျကွလို့ လာအပျလို့လိမျးတာလေ အလုပျလုပျတာလအေဲ့လို့အလုပျလာအပျအောငျလညျး ကိုယျအလုပျ လုပျကွောငျးတငျရတာလေ…မိတျကပျဆရာမှာ မဦေးတောထဲရောကျသှားတယျ လေးစားတယျ ကိုယျလညျးသူ့လိုသတ်တိမရှိဘူး မစှနျ့စားရဲဘူးအဲ့တာအမှနျဘဲ…. ။
ကိုယျ့မွို့ ကိုယျရှာမှာနနေကွေ အလုပျလုပျကိုငျစားနကွေတဲ့ မိတျကပျဆရာတှကေ နိုငျငံ့သစ်စာဖောကျတှဖွေဈသှားရောလား….. မဦေးလိုတောထဲသှား မစှနျ့လှတျရဲတဲ့ မိတျကပျဆရာတှကေ အလုပျမလုပျဘဲ မဦေးကိုအားနာငဲ့ညာ လေးစားသဖွငျ့ အိမျမှာထိုငျနရေမှာလား ငါတို့ထမငျးရှာစားတဲ့အလုပျကိုစှနျ့လှတျပေးရမှာလားငါတို့က company ဝနျထမျးမှဟုတျဘူး တနှဈပတျလုံးအလုပျမလုပျရဘူး work for home လုပျလို့မရဘူး တနှဈမှာ ၄လ ၅လဘဲ ပှဲရာသီခြိနျ အလုပျလုပျရတာအဲ့လတှကေုနျရငျ မိတျကပျဆရာတိုငျး အလုပျမရှိငုတျတုတျနရေတာ ရှာထားသမြှ ထိုငျသုံးရတာအားYarးပွီး လကျအားတိုငျးရေးမနနေဲ့ ကိုယျကိုတိုငျ တောထဲရောကျနပွေီလား ဘာတှမှောပါဝငျနပွေီလဲပွနျကွညျ့အုံး တောထဲကသူကကိုယျတှကေိုလိုကျမတှကျကပျဘူး(မဦေးလညျးသူအဆငျပွတေဲ့နရောမှာသူကနျြးမာစှာ အန်တာရယျကငျးစှာရှိနသေေးတာ သူနဲ့နီးစပျရာအသိုငျးအဝိုငျးကကွားသိထားပါတယျ)မွို့ပျေါနသေူအခငျြးခငျြး လိုကျကပျသပျပွောနတောဘယျလိုအတှေးအချေါလညျး စဉျစားမရဘူးအားနေ မဦေး သနားပါတယျ မဦေးကိုအားမနာဘူးလားပွောပွောနကွေတာ ငါတို့ကိုဘဲမမေးနဲ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျး ပွနျမေးကွအုံး”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပွနျလညျ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။ CeleChitThu ပရိသတျကွီးလညျးမထကျအတှကျအားပေးစကားပွောခဲ့ပါဦးနျော။
” မေဦးနဲ့ယှဉ်ကာ သူ့အား နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်လို ပတ်ရမ်းပြောဆိုနေတဲ့သူကို အချက်ကျကျပြန်လည် ပြေဆိုတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ မိတ်ကပ်မထက်”
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ မိတ်ကပ်မထက်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့အားမိတ်ကပ်မေဦးနဲ့ယှဉ်ကာပြောလာ တရားလွန်ဝေဖန်လာမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန့်ပြန်ချေပခဲ့တာပါ။ ”ငါတို့က အလှူခံစားရမှာလားအလုပ်လုပ်မှ အကုန်နောက်ကလူတွေအဆင်ပြေမှာလေအလုပ်အကြောင်းတင်မှ အလုပ်လုပ်ရတာလေငါဘာမှမတင်ဘဲ ဘယ်သူမှငါ့ကိုလာအလုပ်မပေးဘူးနော်။ငါတို့က သူများအလုပ်ဝင်လုပ်ရတာမှာဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှာလုပ်ရတာအလုပ်ကိုယ့်ဆီလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေရတာကိုယ်ရှာမှရတာကိုကျန်တဲ့သူတွေကိုဝေရမျှရတာဘယ်သူမှတင်မကျွေးထားဘူးနိုင်ငံရေးမေ့ထားပြီး ပျော်နေတဲ့သူထဲလည်းငါတို့မပါဘူး။
မြို့ပေါ်နေတာချင်းအတူတူ သူတို့ကဘဲနိုင်ငံကယ်တင်နေတယ်အချိုးမျိုးနဲ့ငါတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူ အလုပ်အကြောင်းတင်တဲ့သူကဘဲ နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်လို ပတ်ရမ်းနေပြီးပြောနေတယ်မိတ်ကပ်ဆရာက မိတ်ကပ်လိမ်းမှငွေဝင်တာလေ ပွဲရာသီ ဒီအချိန်ဘဲအလုပ်လုပ်ငွေစု ….ပွဲရာသီကုန်ရင် အကုန်ရှိတာထိုင်စားရတာ ထုံးစံလေ အဲ့တာရှေးကတည်းကမင်္ဂလာဆောင်ကြလို့ လာအပ်လို့လိမ်းတာလေ အလုပ်လုပ်တာလေအဲ့လို့အလုပ်လာအပ်အောင်လည်း ကိုယ်အလုပ် လုပ်ကြောင်းတင်ရတာလေ…မိတ်ကပ်ဆရာမှာ မေဦးတောထဲရောက်သွားတယ် လေးစားတယ် ကိုယ်လည်းသူ့လိုသတ္တိမရှိဘူး မစွန့်စားရဲဘူးအဲ့တာအမှန်ဘဲ…. ။
ကိုယ့်မြို့ ကိုယ်ရွာမှာနေနေကြ အလုပ်လုပ်ကိုင်စားနေကြတဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာတွေက နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်တွေဖြစ်သွားရောလား….. မေဦးလိုတောထဲသွား မစွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာတွေက အလုပ်မလုပ်ဘဲ မေဦးကိုအားနာငဲ့ညာ လေးစားသဖြင့် အိမ်မှာထိုင်နေရမှာလား ငါတို့ထမင်းရှာစားတဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ပေးရမှာလားငါတို့က company ဝန်ထမ်းမှဟုတ်ဘူး တနှစ်ပတ်လုံးအလုပ်မလုပ်ရဘူး work for home လုပ်လို့မရဘူး တနှစ်မှာ ၄လ ၅လဘဲ ပွဲရာသီချိန် အလုပ်လုပ်ရတာအဲ့လတွေကုန်ရင် မိတ်ကပ်ဆရာတိုင်း အလုပ်မရှိငုတ်တုတ်နေရတာ ရှာထားသမျှ ထိုင်သုံးရတာအားYarးပြီး လက်အားတိုင်းရေးမနေနဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင် တောထဲရောက်နေပြီလား ဘာတွေမှာပါဝင်နေပြီလဲပြန်ကြည့်အုံး တောထဲကသူကကိုယ်တွေကိုလိုက်မတွက်ကပ်ဘူး(မေဦးလည်းသူအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာသူကျန်းမာစွာ အန္တာရယ်ကင်းစွာရှိနေသေးတာ သူနဲ့နီးစပ်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကကြားသိထားပါတယ်)မြို့ပေါ်နေသူအချင်းချင်း လိုက်ကပ်သပ်ပြောနေတာဘယ်လိုအတွေးအခေါ်လည်း စဉ်စားမရဘူးအားနေ မေဦး သနားပါတယ် မေဦးကိုအားမနာဘူးလားပြောပြောနေကြတာ ငါတို့ကိုဘဲမမေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ပြန်မေးကြအုံး”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးလည်းမထက်အတွက်အားပေးစကားပြောခဲ့ပါဦးနော်။
Previous Article ” သူငယျခငျြးအဖှဲ့ဝငျအငယျဆုံးလေးအလှမယျအေးခမျြးမိုးရဲ့ပှဲကိုတကျရောကျဂုဏျပွုရငျး အပြိုကွီးတဈကိုယျတညျးSingleဖွဈကွောငျး ဈေးဗနျးခငျးလိုကျတဲ့ ခေးဆကျသှငျ”
Next Article ” အနုပညာအလုပျတှလေုပျခှငျ့ရတုနျး အပွညျ့အဝလုပျကိုငျခငျြတာကွောငျ့ ပရိသတျတှအေပွဈမမွငျကွဖို့ တောငျးပနျလာတဲ့ ဘုနျးလြှံ”